> Resource > Lugood > Methods Easy Marka iPad ma hagaagsan doonaa la Lugood
Sida caadiga ah marka aan ku xidhi iPad in aan laptop, Lugood furmo si toos ah ama mararka qaarkood waxaan gacanta furo ka dibna waxaan u hagaagsan kartaa wax kasta waxaan doonayaa. Si kastaba ha ahaatee, u usbuucii la soo dhaafay markasta oo waxaan iyaga isugu xirmaan iPad ka bilowdey amraya halkii syncing iyo markii aan furo Lugood iPad uusan ka muuqan.
Isku dayaan in ay u hagaagsan iPad la Lugood, laakiin waxba dhicin? Waa dhibaato universal in badan oo dadka isticmaala ku naxay sheekada iPad, sidaada oo kale. Wax kasta oo sababta keentay in hagaagsan Lugood failure, waa in aad rabto in aad sida loo xaliyo. Halkan, qodobkan looga golleeyahay aad siinaya dhowr hab si ay u xaliyaan dhibaatada in iPad ma hagaagsan doonaa Lugood.
Habka 1. barkinta aad iPad iyo surin ay cable mar USB galay
Habka 2: Dib u celi router marka syncing badan WiFi
Habka 3. Update Lugood in nooca ugu dambeeya
Habka 4. Dib-u-fasaxayaa Lugood iyo computer
Habka 5. reboot ama dib aad iPad
Habka 6. Isticmaal qalab Xisbiga 3-
Habka 1. barkinta aad iPad iyo surin cable USB ay mar
Xaaladda waxaa laga yaabaa in ay dhacaan, marka aad iPad xidhmaan computer via cable USB ah, iPad uusan heli soo oogay, laakiin computer ma waxaa ka akhrisan kartaa sida disk adag dibadda, kama Lugood aad. Marka ay tani dhacdo, waxaad kaliya furaysto karo aad iPad iyo surin cable USB ah in la sameeyo xidhiidhka markii labaad. Haddii ay weli ku guuldareysto in ay ka shaqeeyaan, waxaad bedeli kartaa cable USB kale iyo mar kale isku dayaan.
Mararka qaarkood, waxaa laga yaabaa in xidhiidhka ka wireless siinaya kor u fashilka u hagaagsan. Xaaladdan oo kale, waxa aad dib karaa router ah. Dami wadada oo mar kale u noqon on.
Marka aad dareentid in aad aan u hagaagsan karo iPad la Lugood, lahaa inaad si fiican u hubiyo in Lugood rakiban yahay mid dambeeyay. Haddii aan, fadlan u cusbooneysiin Lugood in mid ka mid ah ugu danbeeyay. Markaas, mar kale u hagaagsan aad iPad in Lugood. Habkani hagaajin laga yaabaa Lugood oo aad u fiican u shaqeeyaan.
Fur Lugood iyo guji Store . In liiska hoos-hoos u, guji Deauthorize Tani Computer ... iyo saxiixa ku ID Apple ah. Marka deauthorizing waa dhameystiran, guji fasaxayaa Tani Computer ... in ay mar kale u reauthorize. Ama, taga oo soo daydaya computer kale. Ogolaato computer kale iyo mar kale isku dayaan. May Tani waxay ka shaqeeya.
Haddii aad iPad ma hagaagsan doonaa Lugood, waxa kale oo aad isku dayi kartaa in aad xidho iPad oo reboot. Markaas, u hagaagsan iPad la Lugood. Mararka qaarkood, taas oo ka dhigi karta Lugood dib si caadi ah u shaqeeyaan. Haddii aan, waxa kale oo aad isku dayi kartaa resetting aad iPad. Waxaan ku leeyahay resetting aad iPad laga yaabaa inay qaadato aad iPad hoos halis, waayo, waad lumin doonaa dhammaan macluumaadka ku yaal. Sidaas darteed, hubi in aad dib u leeyihiin dhammaan xogta ku iPad hor resetting.
Habka 6. Isticmaalka qalab Xisbiga 3-
Marka Lugood ma hagaagsan doonaa iPad, waxaad isku dayi kartaa wax ka duwan. Maalmahan, waxaa tahay qalab badan oo kale Lugood in si iPad u hagaagsan karo xogta. Halkan, waxaan idinku talinaynaa lagu kalsoonaan karo mid ka mid ah - TunesGo Wondershare ama TunesGo Wondershare (Mac) . Labada qeybood oo waa waxtar leh marka aad ka computer si iPad, iyo qeybsanaan ku xigeenka u hagaagsan xogta.
Download iyo rakibi qalab iyo waxa ay isku dayaan in aad naftaada. Dooro version saxda ah waa la jaan qaada your computer. Halkan, waxay kuu ogolaanaysaa 'isku day version Windows ah.
Tallaabada 1. Isku aad iPad iyo abuurtaan qalab this
Kombiyuutarka xiriiriyaan iPad deeruhu in cable USB ah soo socda la iPad. Ka dib markii aad ka baareyso iPad, qalab u muujin doonaa in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. nidaameed iPad la Lugood
Tag Copy iDevice in Lugood , badhanka ugu horeeyay ee ku yaalla khadka hoose. Yar suuqa kala A baxa. By gujinaya Start , waxaad ka heli suuqa kala kale. Just hubi faylasha aad rabto in aad u hagaagsan. Markaas, guji Copy in Lugood . Transfer wuxuu noqon doonaa si dhakhso ah oo xasiloon. Hubi in iPad aan barkinta doonaa inta lagu guda jiro oo dhan.
Maxaa dhacaya haddii aad doonaysid in aad u hagaagsan files ka computer si aad iPad iyo qeybsanaan? Kaalay column ka tagay. Siday u kala horreeyaan, guji Media , Playlists , Photos , Xiriirada iyo SMS (SMS kaliya dhoofin karo). Daaqadda maamulka, guji Add ama Import / Dhoofinta si hagaagsan files si aad iPad, oo guji dhoofinta inay ama Import / Dhoofinta si hagaagsan files iPad in computer.
Fiiro gaar ah: The version Windows kuu ogolaanayaa inaad u hagaagsan files ka badan oo ay ku jiraan sawirrada, xiriirada, iyo SMS badan version Mac ma.
Sidee si ay u gudbiyaan Video inay iPad aan Lugood
Solutions for Session ee kaabta Lugood fashilmay
Sida loo soo celiya Xiriirada oo keliya ka kaabta Lugood
Lugood shawladda kaabta u Mavericks, Waraaqda kaabta Lugood on Mavericks Mac ah
Sida loo soo celiya Lugood Library ka iPhone
Sida loo Download Lugood Radio Music aan Loss Quality